डाक्टर भागेर काठमाण्डौँ गएपछि बिरामीले उपचार पाएन्न – www.agnijwala.com
डाक्टर भागेर काठमाण्डौँ गएपछि बिरामीले उपचार पाएन्न
जाजरकोट , बिना जानकारी डाक्टर सन्जय यादव काठमाण्डौँ गएपछि यहाँको नलगाड नगरपालिका दल्ली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समस्य भएको छ । दुई जना डाक्टरको दरबन्दी भएको केन्द्रमा एक जना मात्र कार्यरत रहेका यादव सुक्रवार बिभिन्न बहाना वनाउँदै स्वास्थ्य स्वास्थ्य छोडेर भागेपछि अहिले स्वास्थ्य संस्था डाक्टर बिहिन भएको हो । गर्मी मौसम सुरुवात संगै अहिले दैनिक स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको चाप बढेसंगै डाक्टरले स्वास्थ्य संस्था छोड्दा समस्य भएको छ ।
किन छाडे स्वास्थ्य संस्था डाक्टरले ?
गत बुधवार स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सामा बारेकोट गाउँपालिका वडा २ का नन्दवीर कामीको लडेर मृत्यू भएको सबलाई परिक्षणका लागि डाक्टर बोलाएको थियो । जाजरकोट सदरमुकामबाट लिम्सा जाँन टाढा भएकाले दल्ली स्थित स्वास्थ्य केन्द्रवाट डाक्टर सन्जय यादवलाई लिम्सा जाँन स्वास्थ्य प्रमुख रामवहादुर नेपालीले आग्रह गरेपनि डाक्टर यादव अटेर गरेर लिम्सा नगएको आरोप उहाँ माथि लागेको छ ।
स्वास्थ्य प्रमुखले पटक ,पटक डाक्टर यादवलाई अप्ठयारोवाटो भएकाले सव दल्ली ल्याउन समस्य भएकोले लिम्सा जाँन आग्रह गरेपनि सो आग्रह नमानेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाही समक्ष स्वास्थ्य प्रमुख नेपालीले डाक्टर नजाँदा समस्य भएको जानकारी गराउनुभएको थियो । डाक्टर यादव दल्लीमै बसेपछि प्रजिअ शाहीले खटाएको काम नगर्ने भन्दै डाक्टर यादवलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । प्रजिअ शाहीको कारवाही गर्ने उर्दी पछि डाक्टर यादव असुरक्षा भएको भन्दै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्ली छाडेर सुक्रवार काठमाण्डौँ लागेको बताउनुभयो ।
मेरो समस्य समाधान नहुँजेल सम्म आफु दल्ली नफर्कने उहाँको भनाई छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भनेको हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ तर अभिभावकले नै कुुट्छु , मार्छु भनेर धम्की दिएपछि म कसरी दल्ली बस्न सक्छु ? उहाँले भन्नुभयो । यत्ता सवरिक्षणको काम बिहिवार सदरमुकामवाट डाक्टर अमिन शाह दुई दिन हिडेर गई सव परिक्षण गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय जाजरकोटले वताएको छ ।
यत्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले डाक्टरलाई कार्यालय प्रमुखले भनेको कुरा मानेर लिम्सा किन नगएको ? समस्य भएको ठाउँमा खटिनु ठाउँमा अहिले सम्म दल्लीमै किन बसेको , अटेर गर्ने लाई कारवाही गर्ने भनेको बताउनुभयो । नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकवहादुर रावलले विरामी छाडेर डाक्टर विना सम्पर्क जिल्ला छाड्नु दुखद भएको वताउनुभयो ।
प्रजिअ शाहीलाई कारबाहीको माग
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख रामवहादुर नेपालीले अराएको काम नमार्ने कस्तो बिडम्वना हो भन्दै दुख व्यक्त गर्नुभयो । उत्ता सरकारी चिकित्सक संघ नेपालले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरि प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने र डाक्टरको सुरक्षा हुँनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पदको दुरुपयोग गरेको समेत उल्लेख भनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघको विज्ञप्ति प्रति जाजरकोटका सरोकारवाला निकायले विरोध जनाएका छन् ।yandexgoldenpagesсоздание и оптимизация сайтовvkкак переслать сообщение в вайбере другому человекукак циклевать паркет